Firefox Izwi, chirongwa chitsva cheMozilla chekubata Firefox nemirairo yeZwi | Linux Vakapindwa muropa
Kufanana nevatambi vakawanda vema digital, hwaro hweMozilla hunofarira vabatsiri vezwi. Semuenzaniso, akatanga chirongwa cheCommon Voice, seti yedata renzwi rinobvumidza mabhizinesi madiki kuumbiridza yavo yehunyanzvi njere uye izvo zvinogona kudzora kutonga kweGAFAM pane vabatsiri veadhijitari.
Asi panguva imwe chete, Mozilla yakashandawo mu chigadzirwa chinokutendera iwe kudzora bhurawuza rako nemirairo yezwi. Uye ndeyekuti kubvira mwedzi wapfuura Mozilla yakatanga kuyedza iyo yekuwedzera Firefox Izwi game izwi rekuyedza izwi rekufambisa iyo inobvumidza iwe kushandisa izwi kuraira kuita zvakajairika browser zviito.
1 Nezve Firefox Izwi
2 Nzira yekuyedza sei Firefox Voice?
Nezve Firefox Izwi
Firefox Izwi inoshanda seye smart screen izwi mubatsiri mukati mebrowser sekuwedzera.
Kamwe yaiswa, mushandisi anogona kubvunza kuzadzisa kuvhura mawebhusaiti, chinja kune imwe tebhu, tora skrini peji uye nezvimwe.
Mumwe muenzaniso wekushandisa kwayo ndewekuti, kana mushandisi ari pane vezvenhau saiti, unogona kushandisa mirairo senge 'Tamba', 'Mira zvishoma' uye 'Mute'. TOUyezve, inogona kuita akasiyana siyana mabrowser mabasa, senge kugovera mapfupi kumutemo wakareba, verenga zvinonzwika, mbeveve tebhu.
Firefox Inzwi inzira yeMozilla iyo inokutendera kuti ufambe uye uite zvakawanda nezwi rako, nekukurumidza kupfuura nakare kose. Tiri kutsvaga vashandisi vekutanga vane hushingi avo vari kuda kupa iyo nyowani plugin uye tipeiwo mhinduro pamberi pekutanga kuruzhinji.
Uyewo, Firefox Inzwi rinogona kutanga nekudzvanya bhatani re plugin kana kushandisa nzira pfupi yekhibhodi. Firefox Izwi rinonzwisisawo mutauro wechisikigo. Naizvozvo, haina chete kusunganidzwa kune chaiwo mirairo.
Kusiyana nemukurukuri akangwara, haina izwi rekumuka, zvirinani zvisati zvaitika uye zvinogoneswa nekudzvanya pane icon iri pakero bar. Icho chishandiso chinogumira kudesktop vhezheni yebrowser uye inoshanda chete muChirungu.
Firefox Izwi rinobva paGoogle Cloud Speech Service (Google Cloud Voice Service), asi maseva eMozilla anotsanangurwa mukodhi plugin (zvigadziriso zvinogona kutsanangurwa panguva yekuumbwa).
Iyo yekuvanzika mutemo faira inotaura kugona kutumira izwi rezwi kuMozilla neGoogle Cloud Speech, saka mukufunga iwe unogona kunzwisisa zvese izvo Google zvawedzera papuratifomu yavo.
Izvo zvakare zvinoreva kuti mirairo yese yezwi inoendeswa kuburikidza nemaseva eGoogle, asi haina chero chinyorwa chezvainoita, sekureva kweMozilla. Nokusingaperi, Mozilla hainamatire kurekodha chero, asi vashandisi vanogona kusarudza chirongwa apo odhiyo ichashandiswa kusimudzira Firefox Izwi.
Iko kurongedzerwa kwekuwedzera kwe Firefox Izwi rinosiyana neyakajairwa ezwi kudzora masisitimu mukuti haina kutarisisa kutsiva mbeva uye keyboard kana uchikanganisa chimiro, asi panzvimbo pacho yakamisikidzwa sechishandiso chekubata mibvunzo mumutauro wechisikigo, kuita semubatsiri wezwi.
Semuenzaniso, mushandisi anogona kutumira mirairo yakadai sekuti "mamiriro ekunze ari sei", "tsvaga tebhu neGmail", "dzima ruzha", "chengetedza sePDF", "zoom in", "vhura webhusaiti yeMozilla".
Nzira yekuyedza sei Firefox Voice?
Pakupedzisira, kana iwe uchida kuyedza Firefox Izwi uye ongorora mashandiro ako wega, hapana chinogona kuve nyore, iwe unongofanirwa kuvhura yako Firefox browser uye enda kune iro rekuwedzera peji kutsvaga plugin.
Mushure mekuisa iyo plugin, mushandisi anokumbirwa kuti ape kodzero yekutora nekuongorora matemplate ezwi pamwe nekuchinjiswa kwayo kumaseva eMozilla kuti iwedzere kunyatsoita sevhisi (iyo data inounganidzwa isingazivikanwe uye haina kutumirwa kune vatatu). Kana, kune rimwe divi, tumira telemetry ine izwi re data (iri sarudzo uye inogona kurambwa).
Nenzira imwecheteyo, iwe unogona kugovera kuchirongwa nekusimbisa ma audios kana kutumira kubva chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox Izwi, chirongwa chitsva cheMozilla chekubata Firefox nemirairo yeZwi
Zvinonakidza, ini ndave kuzoyedza kuti ndione kuti zvinofamba sei. Kwaziso nyaya yakanaka kwazvo.
Ini ndakanyoresa kuMozilla nhau, saka ndatova nazvo. Mibvunzo yavanofunga iri kufamba zvakanaka kwazvo. Kubva pakutanga ndakavapa kodzero dzekuunganidza, nekuti ini ndinotsigira zvinoitwa nenheyo iyoyo. Ndakaedza mimwe mibvunzo muChirungu, uye rimwe basa, uye mimwe haina. Uye sezvo ini ndichitaura Spanish, ndinomubvunzawo mibvunzo muSpanish, ndichiziva kuti ichiri kungoshanda muChirungu, kuitira kuti avo vanoshanda pachirongwa vazive kuti isu tiriwo vasiri-vatauri veChirungu vanofarira. Vamwe vanoshanda zvakafanana. Vashoma, asi vanoshanda. Zvinoitikawo nemimwe mitauro. Ndakamukumbira, muchiGerman (Google Dudziro kuburikidza) kuti andiendese kunzvimbo yeDeustche Welle, uye akadaro. Yakanaka zano. Ndiri kunetsekana nezvekupindirana kweGoogle, asi ini ndichiri kutsigira.